Amanqaku eLorraine Ball Martech Zone |
Amanqaku ngu Lorraine Ibhola
I-Facebook, i-LinkedIn kunye ne-Twitter zonke ziye zaqinisa umnikelo wazo wentengiso. Ngaba amashishini amancinci atsibela kwimithombo yeendaba zentengiso? Esi yayisesinye sezihloko esasizikhangela kuvavanyo lwentengiso ye-intanethi yalo nyaka.
Uqikelelo lwentengiso lwango-2016
NgoMvulo, nge-7 kaDisemba ngo-2015 NgoMgqibelo, Disemba 26, 2015 Lorraine Ibhola
Kanye ngonyaka ndophula ibhola yekristal endala kwaye ndabelana ngoqikelelo lokuthengisa ngeendlela endicinga ukuba ziya kubaluleka kumashishini amancinci. Kunyaka ophelileyo ndaye ndachaza ngokuchanekileyo ukunyuka kwentengiso yentlalontle, indima eyandisiweyo yomxholo njengesixhobo se-SEO kunye nenyaniso yokuba uyilo oluphendulayo olusebenzayo alusayi kuphinda lukhethwe. Ungazifunda zonke iingqikelelo zam zentengiso zango-2015 kwaye ubone ukuba bendikufutshane kangakanani. Emva koko funda ukuya
Kwiminyaka elishumi eyadlulayo, ukhetho lokuthengisa kubanini bamashishini abancinci lwalunomda. Imithombo yeendaba ngokwesiko njengonomathotholo, iTv kwaye uninzi lwentengiso yokuprinta lwalubiza kakhulu kumashishini amancinci. Emva koko kwafika i-intanethi. Ukuthengisa nge-imeyile, imidiya yoluntu, iibhlog kunye namagama entengiso anikezela kubanini bamashishini abancinci ithuba lokufumana umyalezo wabo. Ngequbuliso, unokwenza into engekhoyo, inkampani yakho ibinkulu kakhulu ngoncedo lwewebhusayithi enkulu kunye noluntu olomeleleyo
NgoMgqibelo, nge-11 kaFebruwari ngo-2012 NgoLwesithathu, uDisemba 26, 2012 Lorraine Ibhola
Kwiminyaka engama-XNUMX eyadlulayo njengoko umabonwakude wayevela kwindawo, iintengiso zikamabonwakude zazifana neentengiso zikanomathotholo. Zazinendawo yokuma komntu omi phambi kwekhamera, echaza imveliso, kakhulu ngendlela ayenokwenza ngayo kunomathotholo. Umahluko kuphela yayikukuba wawumbona ephethe imveliso. Njengoko iTV ikhula, nentengiso ikhulile. Njengoko abathengisi bafunda amandla okubonakalayo benza iintengiso zokubandakanya iimvakalelo, ezinye bezihlekisa, ezinye